Lahatsary: ​​Fanjonoana B2B miaraka amin'ny dokambarotra Bizo | Martech Zone
Lahatsary: ​​Fanjonoana narahin'ny B2B niaraka tamin'ny dokambarotra Bizo
Alakamisy, Jolay 25, 2013 Douglas Karr
Isaky ny manazava ny dokam-barotra sy ny varotra amin'ny olon-drehetra aho dia mampiasa ny fampitahana amin'ny jono foana. Nanangana infographic mihitsy aza izahay ho an'ireo mpanohana anay, Right On Interactive, izay mampiseho ny varotra androm-piainany momba ny jono.
Ny fampitahana amiko dia ny dokam-barotra no zava-mitranga, fa ny marketing no drafitra. Raha te hanjono ianao dia afaka manipy kankana amin'ny tadiny na aiza na aiza… fa ny varotra dia rehefa manara-maso ny toetr'andro, ny fisarihana, ny toerana, ny halaliny, ary ny singa hafa rehetra hanandramana hitady ireo trondro lehibe indrindra!
Bizo namolavola ity horonantsary ity hilazana ny fomba hanampian'ny sehatra fanaovana doka B2B ny mpivarotra trondro ho an'ny fitarihana tsara indrindra sy lehibe indrindra:
Bizo dia ny fomba hamantaran'ny mpivarotra B2B sy hahatratrarany ireo mpihaino kendreny azy ireo amin'ny Internet. Famatsiam-bolan'ny mpihaino an'i Bizo manam-pahaizana maherin'ny 120 tapitrisa manerantany, ao anatin'izany ny maherin'ny 85% -n'ny orinasa amerikana, ny Sehatra Marketing Bizo afaka mikendry tsara ireo mpandraharaha amin'ny alàlan'ny mason-tsivana manokana momba ny demografika.
Fanadihadihana mpihaino - Tatitra manarona ny fizarana mpihaino mitsidika ny tranokalanao, ny fomban'ireny fitsidihana ireny rehefa mandeha ny fotoana, ary ny mampitaha ny fifamoivoizanao amin'ny tranokala hafa ao amin'ny tamba-jotra Bizo. Fahafahana mampisaraka ireo mpitsidika eo amin'ny sehatry ny varotra tena kendrena.
Social Marketing - Fahafahana hanafohezana rohy ary hizara / handahatra bitsika mivantana avy amin'ny tranokala; tweets tag araka ny lohahevitra, karazana atiny, sy maro hafa ho an'ny fanadihadiana lalindalina kokoa; manolotra tolotra sy mitondra fiara rehefa mizara atiny antoko fahatelo. Araho ny fiovam-po avy amin'ny rohy zaraina ka hatrany amin'ny ambaratonga sioka.
B2B fampirantiana doka fampisehoana - Doka fampisehoana lasibatry ny angon-drakitra fananan-tenan'i Bizo sy / na doka fampisehoana kendrena miorina amin'ny lisitry ny anaran'ny orinasa voafaritra.
Doka ara-tsosialy - Fanitarana hatrany amin'ny tamba-jotra LinkedIn; fanarahana ny fanovana amin'ny ambaratonga doka; fanaovana tatitra amin'ny antsipiriany / famakafakana ary fampirantiana fampisehoana kendrena ao amin'ny Facebook izay atosiky ny tahirin-kevitra momba ny demografika momba ny orinasa Bizo.
Famerenana ny doka - Mikendry mpitsidika tranonkala teo aloha miaraka amin'ny doka fampisehoana, olona kendrena eo amin'ny fiaraha-monina izay tsindrio ny rohy ifampizaranao miaraka amin'ny doka fampisehoana, na amin'ny alàlan'ny CRM amin'ny fanomezana Bizo adiresy mailaka misy encrypt avy amin'ny angona CRM.
Bizo ny ny mpanjifa dia mampiasa ny fitantanana angon-drakitra sy ny fahaiza-mikendry hahatratra ny mpihaino na aiza na aiza no fivezivezin'izy ireo amin'ny Internet ary ampidirina amin'ireo izay tonga amin'ny tranonkalany, pejy fandraisana, ary fantsona sosialy. Nahazo ny fahatokisan'ny mpivarotra SMB mihoatra ny 600 sy marika lehibe manerantany i Bizo, anisan'izany ny AMEX, Mercedes Benz, Monster, Salesforce.com, Porsche, Microsoft, AT&T, ary UPS izay mampiasa Bizo hanan-kery amin'ny dingana rehetra amin'ny fivarotana sy ny fivarotana fivarotana.
Ahoana no handrefesanao ny varotra atiny?
Paikady fanehoan-kevitra: Ny tokony hatao sy ny tsy tokony hatao
Jul 29, 2013 amin'ny 5: 36 AM
Fizarana mahafinaritra amin'ity karazana fampahalalana mahavariana nasondrotra tao amin'ny blôginao ity. Misaotra betsaka amin'ny fizarana hevitra mamorona. Tiavo foana ity karazana lohahevitra famoronana sy zavatra ity. Fizarana mahafinaritra hatramin'izay!